En vente actuellement 09/11/2018
Mihena 4 kilao mialohan’ny fety….ahenao be ny menaka, izao atao!
Tena fototra mampatavy ny menaka sy ny sakafo matavy. Araka izany, raha ireo fotsiny no ahena dia mety hihena tokoa ny vatana. Mbola manana fotoana rahateo hihenana mialohan’ny fety. Misy kipitsopitsony tsara ho fantatra ireto…
Toy ny ahoana ary ny sonian-dry Beyoncé, Kristen Stewart, Hitler…
Rehefa tafahaona amin’ireny olo-malaza ireny dia satry haka sary hiaraka amin’izy ireo.
Akoho amin’ny voasarimakirana
Akora ilaina · Voasarimakirana 4 · Akoho lehibe 1 efa niala ny atiny · “bouquet garni” · Dibera 2sf · Lard fumé tetika 8 · Sira sy dipoavatra
“Foulard” : haingo mampiavaka ny taovolo
Haingom-bolo tena lamaody ny « foulards » amin’izao fotoana izao. Fomba iray entina hampiavaka ny taovlo efa mahazatra izy ity. Ny tena mahatsara azy dia izy mety ho an’ny salan-taona rehetra sy ny fotoana rehetra.
Mampiasa hareza : Ny atao mba tsy ho tratran’ny “poil incarné”
Ny olona tia miharatra no tena mora tratran’ireny volo tsy mety mivoaka ety ivelan’ny hoditra ireny, izay antsointsika hoe “poil incarné”. Misy fepetra tokony arahina, araka izany, rehefa mampiasa hareza, mba hisorohana izany amin’ny andavanandro.
Notsatohany antsy ny vadiny, satria tsy masaka tsara ny atody noendasiny !
Niakatra fitsarana tao Saint-Gaudens, Frantsa, ny raharaha momba ny mpivady izay niady noho ny laoka tsy masaka. 56 taona ilay rangahy, izay voalaza fa nanatsatoka antsy ny vadiny. Tamin’ny 21 jona teo no nitrangan’ity raharaha ity.
Navoaka ny fonja i Asia Bibi, vehivavy kristiana voaheloka ho faty tany Pakistan
Votsotra soa aman-tsara i Asia Bibi, ilay vehivavy kristiana izay migadra efa ho 8 taona lasa izay, tany Pakistan.
Tovovavy 13 taona, naolan’ny mpamonjy voina maro
Tovovavy iray 23 taona no niharan’ny fanararaotana ara-nofo avy amin’ireo mpamonjy voina tao Parisy, fony izy 13 taona.
Nipoaka ny kitapom-bihin’ilay lehilahy nanalehibe filahiana !
Lehilahy tera-tany amerikanina iray, Jack Chapman, no nanindrona fingotra an’ireo kitapom-bihiny anankiroa.
Nanapa-kevitra izaho sy ny olon-tiako fa hanao “pause” kely aloha.
Efa 3 volana anefa izay no lasa, tsy mbola niverina niresaka tamiko ihany izy. Henoko fa efa misy vehivavy miaraka aminy any ary omaly dia hitako fa nesoriny tsy ho namany intsony aho, tao anaty Facebook. Tokony mbola hiandry azy ve aho ?
Efa karazana adidin’ny vehivavy mihitsy ny manao izay hahamety sy hahamendrika paozy isan’andro.
« La joie s’acquiert. Elle est une attitude de courage. Etre joyeux n’est pas une facilité, c’est une volonté » (Gaston Courtois)
Feno sedra izao fiainana iainantsika izao. Tsy teniteny fahazarana, na mandeha ho azy fotsiny ilay hoe : “sarotra ny fiainana”, fa isan’andro vaky ny tsirairay amin’ny olombelona dia saika mahatsapa izany daholo.